အိမ်သာထဲထိ ဖုန်းယူသွားတတ်သူတွေ ဘယ်လောက် ကြောက်စရာကောင်းလဲ နှိပ်ကြည့်လိုက် - 9+ Myanmar Login
Register မူလနေရာ နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ အဆန်းများ မော်လ်ဒယ်များ အားလုံးကြည့်ရန် သုတအထွေအထွေ Videos Photos အိမ်သာထဲထိ ဖုန်းယူသွားတတ်သူတွေ ဘယ်လောက် ကြောက်စရာကောင်းလဲ နှိပ်ကြည့်လိုက် 9mpro
424 views00 Like
Short Link Embed 550x350
တခါတရံ ဖုန်းကို အိမ်ထဲထိ ယူသွားတတ်ကြပါတယ်။
ဒါ သိပ်အန္တရာယ်များတဲ့ အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ အခြားသူတွေကို ရောဂါပိုးတွေနဲ့ ထိတွေ့စေနိုင်ပါတယ်။ လက်ကဆေးစရာရှိတာကိုဆေးပြီး ဖုန်းကိုင်မယ်ဆိုရင်တောင် လက်ဆေးရတာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သလို ဖုန်းပေါ်ကပ်ပါလာတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေအားလုံး လက်ပေါ်ပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ ဒေါက်တာ Lisa Ackerley က ဆိုပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးနဲ့ မစင်အညမ်းအကြေးကူးပြောင်းမှာ စိုးရိမ်ပါက အိမ်သာထဲ ဖုန်းမယူသွားသင့်ဘူးလို့ Queen Mary&#39;s တက္ကသိုလ် ဇီဝဆေးဝါးသိပ္ပံဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာ Ron Cutler က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အညစ်အကြေးပမာဏက အိမ်သာရှိတဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီး များစွာ ခြားနားတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ရုံးသေးသေးလေးက ပြသနာမဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ရောဂါပိုးမွှားတွေ အဆင့်ဆင့်ပျံ့နှံ့နေနိုင်တဲ့ ဆေးရုံ သို့မဟုတ် အပျော်စီးသင်္ဘောတွေကတော့ တခြားစီဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးကူးစက်တာ လက်တစ်ခုတည်းကနေမဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ရေဆွဲချရာက အမှုန်အမွှားတွေဟာ ၆ ပေဝန်းကျင်အထိ ကူးနိုင်ကြောင်း ဒေါက်တာ Ackerley က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွားတိုက်တံတွေကို အိမ်သာနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် မထားသင့်သလို ဖုန်းကိုလည်း အိမ်သာရေတိုင်ကီပေါ် မထားသင့်ပါဘူး။
ရောဂါပိုးတွေဟာ ဖုန်းပေါ် ၂ရက်မက အသက်ရှင်နေနိုင်ကြပါတယ်။ ဖုန်းပူနွေးက ဘက်တီးရီးတွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ဝန်းကျင်ဖြစ်စေတာပါ။ သကြားလုံးတွေကိုင်ပြီး ဖုန်းမှာ စေးကပ်ကပ်ကျန်ပါက ဘက်တီးရီးပိုးတွေအတွက် ပိုလို့တောင်ကောင်းမွန်တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ဒေါက်တာ Ackerley က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ လက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့ ဆေးကြောပြီး အိမ်သာမတက်ခင် ဖုန်းကို အပြင်မှာထားခဲ့ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
အဆင်မပြေတာများ လိုအပ်တာများရှိပါက အောက်မှာ register လုပ်ပြီး comment ရေးထားခဲ့ပါ။ နောက်လည်း အလည်လာဦးနော်....
ဒီမှာ register လုပ်လိုက်ပါ
ဖုန်းထဲကနေ update အမြဲကြည့်ချင်ရင် ဒီမှာ Apk ဒေါင်းပြီး install လုပ်ထားလိုက်ပါ။ Published6months ago Category Picture
0 Comments Next Media
ချာတိတ်မလေးတွေ အခန်းထဲ ဒွန့်ချင်တိုင်းဒွန့်နေကြတဲ့ ကိုယ်တိုင်ရိုက် Live လေးပါ
6 months ago 1:38
0 0	0 views Related Media
" အိုးဋီကာ "(ရေးသားချက် 9+ ကျော်တယ်
6 months ago6months ago " အိုးဋီကာ "(ရေးသားချက် 9+ ကျော်တယ်
0 0	မိန်းမ ဆိုတဲ့အမျိုးက
4,684 views ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ပထမဆုံးအတူနေတဲ့အချိန် သတိထားရမယ့်အချက်များ
6 months ago6months ago ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ပထမဆုံးအတူနေတဲ့အချိန် သတိထားရမယ့်အချက်များ
0 0	220 views KTV မှာလုပ်တဲ့ မမတစ်ယောက်ရဲ့ မရှက်တမ်းပြောထားတဲ့ ရင်ဖွင့်စကားများ
6 months ago6months ago KTV မှာလုပ်တဲ့ မမတစ်ယောက်ရဲ့ မရှက်တမ်းပြောထားတဲ့ ရင်ဖွင့်စကားများ
0 0	355 views ဖူးစငုံစ ပန်းလေးများ အခူးခံရလျှင် ( ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် အိမ်ထောင်ပြုလျှင်)
6 months ago6months ago ဖူးစငုံစ ပန်းလေးများ အခူးခံရလျှင် ( ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် အိမ်ထောင်ပြုလျှင်)
0 0	264 views ယခုအပါတ်အတွင်း ဖြစ်မယ်တဲ့နော်..။
6 months ago6months ago ယခုအပါတ်အတွင်း ဖြစ်မယ်တဲ့နော်..။
0 0	616 views သင်ယူမယ့်မိန်းကလေးက ဒီလိုမိန်းကလေးဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် သေချာစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်တယ်နော်
6 months ago6months ago သင်ယူမယ့်မိန်းကလေးက ဒီလိုမိန်းကလေးဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် သေချာစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်တယ်နော်
0 0	202 views မိန်းမတွေရဲ့ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်း ခန့်မှန်းကြည့်တတ်ချင်ပါသလား..? (နှိပ်ကြည့်လိုက်..)
6 months ago6months ago မိန်းမတွေရဲ့ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်း ခန့်မှန်းကြည့်တတ်ချင်ပါသလား..? (နှိပ်ကြည့်လိုက်..)
0 0	348 views ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေမှ လုံးဝ အပျိုစစ်တာနော်..၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့ ကိုကိုတွေ နှိပ်ကြည့်လိုက်..
6 months ago6months ago ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေမှ လုံးဝ အပျိုစစ်တာနော်..၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့ ကိုကိုတွေ နှိပ်ကြည့်လိုက်..
0 0	539 views အ၀ှါပြုနေတဲ့အချိန် ဒါတွေ မလုပ်မိကြပါစေနဲ့..။ (နှိပ်ကြည့်ထားလိုက်နော်)6months ago6months ago အ၀ှါပြုနေတဲ့အချိန် ဒါတွေ မလုပ်မိကြပါစေနဲ့..။ (နှိပ်ကြည့်ထားလိုက်နော်)00	412 views ယောက်ျားပီသကြစမ်းပါ.. ကိုကိုတို့ရယ်..။ (နှိပ်ကြည့်လိုက်နော်..)
6 months ago6months ago ယောက်ျားပီသကြစမ်းပါ.. ကိုကိုတို့ရယ်..။ (နှိပ်ကြည့်လိုက်နော်..)
0 0	319 views More from this user
အပေးကောင်းလွန်းတဲ့ဆော်လေးနဲ့ အယူကြမ်းလွန်းတဲ့ ကိုကိုတို့တွေ့ကြသောအခါ
6 months ago 5:46
0 0	by 9mpro
892 views သင်ယူမယ့်မိန်းကလေးက ဒီလိုမိန်းကလေးဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် သေချာစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်တယ်နော်
202 views ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေမှ လုံးဝ အပျိုစစ်တာနော်..၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့ ကိုကိုတွေ နှိပ်ကြည့်လိုက်..
539 views ကလေးငယ်လေးတွေရှိသေးတယ် ဖောက်ပြန်နေကြပြီ
6 months ago 2:29
877 views နှစ်သစ်ကူးညနဲ့ တည်းခိုခန်းပေါ်ကမမချော
6 months ago 4:32
726 views Please contact us at info@chatwing.com if you cant embed the chatbox
9+ Myanmar © 2017 All Rights Reserved.
Language EnglishEspañolFrançaisDeutsch Login with Facebook Login with Twitter